ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင်ခွင်မှာပိုက်ရင်း ပျောက်ဆုံး
မျက်နှာပေါ်မှာတော့ အသိုင်းအဝိုင်းကြိုက် မျက်နှာဖုံးနဲ့။
ငါနဲ့ အဝေးဆုံးမှာ ရပ်နေတဲ့သူ။
ငါ့ကို ငါက ပြောတယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 4:25 PM3comments: Links to this post
‘ကွဲကွာမှု’ ချောက်တခု ရှိမှန်းသိလျက်နဲ့
ငါ့ခြေဦးတွေကို အဲဒီ့ဆီ တည့်တည့်
Romantic သံပတ် တင်းအားနဲ့
ဟိုး သက်တန့်နားထိ ရောက်အောင်ပျံခဲ့တယ်။
မြင့်လေလေ အကျနာလေလေမှန်း သိလျက်နဲ့။
အပိုင်းတိုင်းဟာ happy ending နဲ့ လွဲခဲ့
“Goal” ဆိုတဲ့ အသံဟာ ငါနဲ့တော်တော်စိမ်းတယ်။
အချိန်ဇယားနဲ့ ငေးရတဲ့ လမင်းလေးပါလား။
အိပ်မက်တွေ တဘဝစာချုံ့ထည့်ထားတဲ့ ရက်စွဲ
ဒုလ္လဘလေးတခုကို တဲတဲလေး ဖမ်းမိခဲ့လည်း…
လူတယောက် သူ့စိတ်နဲ့သူ မီးလှုံနေတုန်း
လျှပ်စီးလေးတချက် မစို့မပို့ လက်လိုက်တော့…
ညဟာ နဂိုကထက်တောင် ပိုမှောင်သွားသလိုလို….
ဧည့်သည် (၁) ကတော့ ဒီမှာ ပါ။
Posted by Kaung Kin Ko at 2:28 PM5comments: Links to this post
‘ကြွားလုံး’ကို ဝိုင်းဖွဲ့ခတ်နေကြတဲ့ လျှာတွေကြားမှာမှ
Posted by Kaung Kin Ko at 12:40 PM9comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 4:53 PM5comments: Links to this post
ထွက်ပေါက် + ယုံချင်စရာကြီး
Alcohol အရည်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ပုလင်း
တခုတည်းသော ငါအကြွင်းမဲ့ယုံစရာ သတင်းပေါ့။
ရီဝေစေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ information ဟာ
Posted by Kaung Kin Ko at 1:37 PM6comments: Links to this post
ီDo or Commit? နှင့် အခြားကဗျာများ
Do or Commit?
၂၂၀၀ ခုနှစ်ဆီ ခရီးဆန့်လိုက်တယ်။
၂၀ ရာစု သမိုင်းစာအုပ်လေးတအုပ် သယ်သွားမိရုံနဲ့။
Posted by Kaung Kin Ko at 10:42 AM 20 comments: Links to this post
မင်းဦးနှောက်ကိုလည်း စာအုပ်တအုပ်က အုပ်ချုပ်တယ်။
ငါ့ဦးနှောက်ကိုလည်း စာအုပ်တအုပ်က အုပ်ချုပ်တယ်။
ဦးနှောက်ကို ပူဇော်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်က အဆိုးဆုံးပဲ။
လောက အပြင်ဘက်က ကောင်းကင် အရောင်းဆိုင်
အမောပြေ စိတ်တိုင်းကျ သောက်ဖို့ 
Menu ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့…
သင်ယုံကြည်ရာ မှာယူ သုံးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ယနေ့ ဘာမျှ မရပါ။”
ခေတ်ကြီးကိုက child rights တွေ ဘာ rights တွေနဲ့
ခုရက်ပိုင်း ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာတိုလေးတွေကို ကဗျာဟောင်းတချို့နဲ့ ရောပြီး အတူတူ ပြန်တင်လိုက်တာပါ။
Posted by Kaung Kin Ko at 3:33 PM7comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 9:49 AM7comments: Links to this post
ငါ့ကိုယ်ငါ ချွေးပျံရတဲ့ အထိ။
ငါ့ကိုယ်ငါ မရှင်းနိုင်တော့တဲ့ အထိ။
ငါ့ကိုယ်ငါ မငြင်းနိုင်တော့တဲ့ အထိ။
အနာဂတ်မှာ ငါ့ခြေထောက်ပေါ်မှာတောင် ငါရပ်စရာ မလိုတော့တဲ့အထိ။
အလင်းပွင့်လေးတခု အဖြစ်နဲ့ ရောင့်ရဲချင်တယ်။
ငါ့တကိုယ်စာငါ ခပ်ဝါးဝါးလေး မြင်ရသည်အထိ။
Posted by Kaung Kin Ko at 11:34 AM 16 comments: Links to this post
သစ်သီး အခွံတွေက ဟားတိုက်တယ်။
ဂီတသံကို သာယာတယ် ထင်တော့
ဘုရားကျောင်းကန်တွေ တန်ခိုးရှိတယ် ထင်တော့
မိရိုးဖလာတွေကို ပုဆိန်တွေအဖြစ် အာရုံမှားခဲ့တယ်။
သြော်...သစ်ပင်ကို ခုတ်ရမယ့် ပုဆိန်တွေ
Posted by Kaung Kin Ko at 12:57 PM5comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 6:32 PM 12 comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 2:11 PM 12 comments: Links to this post
ငါနဲ့ငါ တော်တော် ဈေးကွာသွားတယ်။
ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး မျက်လှည့်ဆရာဟာ ငါပဲ။
မိုးကြိုးက လျှပ်စီးထက် အရင်လာတယ်။
ငါ့ပန်းပွင့်စကား မိုးကြိုးသွားကို ကြားအပြီးမှာ
အနီရောင် လျှပ်စီးချိုချိုကို ငါငေးလိုက်ရတယ်။
အာရုံထဲမှာ ကင်းဗတ်စ တခု ချိတ်လိုက်ပါ့မယ်
Posted by Kaung Kin Ko at 9:07 AM 19 comments: Links to this post
Labels: My poems, ချစ်တယ်, အချစ်ကဗျာ
နင့်ကြောင့် မရှုမလှ ချော်လဲတိုင်း
နင့်အတိတ်နဲ့ နင် ခြေရာတိုင်းနိုင်တုန်းမို့
၁၅၀၀ လွှင့်နေတဲ့ ကောင်မလေးရေ၊
Posted by Kaung Kin Ko at 11:19 AM 16 comments: Links to this post
Labels: My poems, အချစ်ကဗျာ, မေတ္တာဆိုတာစူးတတ်တယ်